Sababta aysan kuugu wanaagsaneyn inaad maalmo yar shaqeyso - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
September 10, 2019 at 23:05 Sababta aysan kuugu wanaagsaneyn inaad maalmo yar shaqeyso2019-09-10T23:05:01+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Mashquulku lama mid ah ‘shaqada’
Yareynta culeyska shaqada lacagta lagu qaato waxay qofka siin kartaa waqti firaaqo ah amaba tamar uu ku qabto shaqada kale ee uu hayay – balse shirkadaha iyo dowladaha waa inaysna hoos u eegin adeegyadaas sababtoo ah waxay ku tiirsan yihiin dadka oo si bilaash ah ugu shaqeeya.
Daraasad la sameeyay ayaa muujineysa in shaqaalaha haysta maalmo badan oo fasax ah – balse isla mushaarkii uun qaata – ay waqtigooda firaaqada ah ku bixiyaan howlo kala duwan: oo ay ka mid yihiin dheesha qimaarka amaba inay wax ku tabarrucaan dadka da`da ah.
Melanie Oppenheimer, oo ku nool Tokyo ayaa sheegtay in dalka Australia “dadka ay da`doodu u dhaxeyso 35 ilaa 44, ee haysta carruurta yaryar ay yihiin dadka ugu mashquulka badan ee haddana tabarrucaad sameeya”.
Balse ma wada xuma…
Welise dadku waxay in muddo ahba doonayeen inay maalmo yar shaqeeyaan ay u helaan waqti firaaqo ah, caafimaad, wax soo saar, waqti ay qoysaskooda la qaataan iyo ka qeybgalka siyaasadda – wayna u hirgashay.
“Waxaan dareemayaa in dadnimadaada ay ku xiran tahay shaqadaada,” ayay tiri Hartnall.
« Brave Somalia sunk by late goal in World Cup thriller
Odayaal kala hadlay Madaxweyne Farmaajo xariga Wasiir Janan »